About Us - Hebei Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd.
Hebei Textiles niorina tamin'ny 1974, hita ao Shijiazhuang City, Hebei Province.
"Firaisan-kina, fahazotoana, mahasoa sy ny fanoloran-tena" foana ny toe-tsaina orinasa hatramin'ny fananganana. Efa nahavita ambaratonga sy ny fampandrosoana haingana ny asa mafy sy ny ezaka ny asan'ny mpisava lalana. Ny orinasa dia nahazo laza tsara ao an-trano sy any ivelany. isika no voamarina orinasa ny ISO 9001, fomba amam-panao AEO Senior certificated orinasa. Ankoatra izany, koa isika AA Customer ny Sinosure sy ny fanondranana hetra rebate A kilasy orinasa.
Ny orinasa dia nanao ny manome ny manontolo ny avo lenta isan-karazany asa mahomby sy avo kalitao ny vokatra, fanompoana ny mpividy sy ny mpivarotra eran-tany. Taorian'ny 40 taona mitohy fampandrosoana, tsikelikely namorona ny ambony-midina fanondranana ekipa manan-karena amin'ny traikefa sy ny varotra miasa fahaiza-manao, ny vokatra am-polony anjara firenena sy ny faritra toa an'i Eoropa, Amerika, Azia, Afrika ary Aostralia. Ny orinasa isan-taona sy ny fanondranana fanafarana boky ao ambony laharana 30 ao amin'ny faritanin'i Hebei. Ny orinasa isan-taona sy ny fanondranana fanafarana boky tamin'ny 2017 nihoatra ny 100 tapitrisa dolara US.
Ny andian- glycine vokatra niasa noho ny orinasa, miantehitra amin'ny lehibe indrindra manerantany amin'ny famokarana glycine fototra - Hebei Province, Sina izay efa nanorina tena stratejika fiaraha-miasa sy ny orinasa goavana. Ary miorina amin'ny mifameno tombontsoa, dia hanome ny lalao ho an'ny tsirairay tombony. Ny tena vokatra dia Glycine, Glycine chelate, fanafody sy ny hafa intermediates Amino amine. -Pahavitrihana isika hijery ny tsena iraisam-pirenena sy hanompo eran-mpampiasa-penitra, mafy orina ny vidin'ny vokatra sy ny fifaninanana.
Ny zavatra ilain'ny mpanjifa ny fitsipika ireo ny asantsika, ary ny mpanjifa fahafaham-po ny asantsika no lasibatra. Isika vonona ny hametraka fifampitokisana sy fifandraisana soa miara-miasa aminao ao amin'ny ela izy ka connive ny fampandrosoana miaraka fandaharana.
Address: No.42 Xisanzhuang eny an-dalambe, Shijiazhuang, Hebei, Sina
Nahoana ny olona no maka glycine?